Sesilany ny fanakanan-dalana – Bekopaka : nisy 4×4 nitondra mpizahatany voatafika indray | NewsMada
Sesilany ny fanakanan-dalana – Bekopaka : nisy 4×4 nitondra mpizahatany voatafika indray
Tao anatin’ny telo andro monja, tranga fanakanan-dalana nataon’ny jiolahy telo no nitranga, tany Bekopaka. Ny voalohany tamin’izany aza, namoizana ain’olona (mpamily sady mpitarika mpizahatany. Ny faharoa tao Ankatrakatraka, 20 km miala an’i Bekopaka Antsalova, afakomaly tolakandro. Fiara 4×4 miisa efatra no niharan’ny fanafihan-dahalo nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika teo amin’ny fizaran-tany mampisaraka amin’Andimaka. Lasan’ireo dahalo tamin’izany ny vola, telefaonina finday, miampy ny “camera” sy ny fakan-tsarin’ireo teratany vahiny ireo. Avotra soa aman-tsara ihany ireo mpizahatany niharan’ny fanafihan-dahalo. Voalaza fa manararaotra ny haratsian-dalana eo amin’io faritra io ireo jiolahy no mivoaka tampoka avy any anaty kirihitr’ala ary manambana basy ny mpamily sady mandroba ny entan’ireo teratany vahiny tonga hizahatany any amin’ny Tsingin’i Bemaraha.
Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana ao Melaky, maro ireo mpizahatany tonga manao fizahantany amin’iny faritra iny. Trangana fanafihan-dahalo roa sahady izay no niseho tao anatin’ny herinandro. Voalohany tamin’izany ilay fanafihana fiara 4×4 efatra nitondra mpizahatany tao Ambalasatra ny 10 jona 2018 teo. Lasan’ireo mpanafika tamin’izany ny vola antapitrisany niaraka tamin’ny fitaovana sarobidy rehetra tamin’ireo mpizahatany.
Nisy ny fivoriana maika hitadiavam-bahaolana niarahan’ireo tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana niaraka tamin’ny mpandraharaha sy ny mpitandro filaminana, afakomaly. Nifanindran-dalana tamin’ity dinikasa ity indrindra anefa ilay trangana fanafihana faharoa tao Ankatrakatraka ka nahavoaroba indray ireo mpizahatany hihazo ny tsingin’i Bemaraha. Tsy nisy ny aina nafoy nandritra ity fanafihan-dahalo ity. Niezaka nanenjika ireo malaso ihany ny zandary, saingy efa tafaporitsaka ry zalahy.
Manao fanamby mihitsy ny dahalo…
Midika izao fa tena mihantsy sy manao fanamby amin’ny mpitandro filaminana mihitsy ny dahalo. Ao anatina fivoriana hitadiavam-bahaolana iarahan’ireo tompon’andraiki-panjakana ry zalahy no manafika ireo mpizahatany. Misy amin’ireo mpandraharaha sasany misehatra ao anatin’ny tontolon’ny fizahantany ny mikasa hanafoana ny fitondrana mpizahatany mankany amin’ny Tsingin’i Bemaraha noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana.
Tinapaka tao amin’ny fivorian’ireo tompon’andraiki-panjakana kosa anefa fa misy ny fepetra noraisina manokana amin’ireo fiara mifamezivezy amin’iny faritra iny. Tsy maintsy arahina zandary hatrany ireo fiara hisorohana ny fanafihan-dahalo.